Linux Mint 19.3 inosvika iine dzakasiyana siyana dzekuvandudza uye dzimwe nhau | Kubva kuLinux
Linux Mint 19.3 inosvika iine dzakasiyana siyana dzekuvandudza uye dzimwe nhau
Inonyanya kufarirwa Ubuntu-based Linux yekuparadzira timu yekuvandudza, Linux Mint yakazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni ye "Linux Mint 19.3" iyo yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS (saka inotsigira kutsigira-kwenguva refu).
Iyo nyowani Linux Mint inowanikwa neCinnamon, Xfce uye MATE desktops. Linux kernel vhezheni 5.0 inowanikwa uye Cinnamon yakasvetukira kuiyo shanduro 4.4, kunyangwe hazvo mashoma maficha maficha akawedzerwa panguva ino tarisiro yanga iri pane kugadzirisa bug.
Linux Mint 19.3 ine chete zvine mwero shanduko. Iko kune nyowani yekurodha skrini uye logo nyowani, pakati pezvimwe zvinhu. Pakavewo nekuchinja pane divi rekushandisa.
1 Chii chitsva muLinux Mint 19.3?
2 Dhawunirodha uye tora Linux Mint 19.3
Chii chitsva muLinux Mint 19.3?
Sezvambotaurwa mune ino shanduro yeLinux Mint 19.3 inoenderera neUbuntu 18.04 LTS base, pamwe neKernel 5.0Inobatanidza iyo actualizaciones de mamiriro edesktop XFCE 4.14, Mate 1.2 uye Cinnamon 4.4.
Pamwe chete nazvo XAppStatus applet uye XApp.StatusIcon API inokurudzirwa, iyo inoita imwe nzira yekuisa mifananidzo nemireza yekushandisa mune system system.
XApp.StatusIcon inogadzirisa matambudziko anomuka kana uchishandisa Gtk.StatusIcon, yakagadzirirwa kushandisa mapikisheni gumi nematanhatu epikisheni, ine nyaya dzeHiDPI uye yakasungirirwa kumatekinoroji enhaka seGtk.Plug neGtk.Socket, ayo asingatsigirwe neGTK16 neWayland.
Gtk.StatusIcon inosanganisirawo kunyorera-padivi kupa, kwete muapplet. Kugadzirisa matambudziko aya, Ubuntu yakaronga iyo AppIndicator system, asi haitsigire mashandiro ese eGtk.StatusIcon uye, sekutonga, inoda kugadzirwa kweapplet.
XApp.StatusIcon, senge AppIndicator, inoratidza inomiririra icon, chishandiso chekushandisa uye chinyorwa parutivi rweapplet, uye inoshandisa DBus kuendesa ruzivo kuburikidza nemaapplet.
Iko kuendesa padivi peapplet kunopa mhando dzemhando yepamusoro chero hupi saizi uye inogadzirisa matambudziko ekuratidzira. Iyo inotsigira kuchinjirwa kwezviitiko zvekudzvanya kubva kuapplet kuenda kunyorera, inoitwawo kuburikidza neDBus bhazi.
Zvekuenderana nemamwe madhesiki, App.StatusIcon appendikisi yakagadzirirwa, iyo inosarudza kuvepo kweapplet uye, kana zvichidikanwa, inodzokera kuGtk.StatusIcon, iyo inobvumidza iwe kuratidza mifananidzo kubva kune yekare Gtk.StatusIcon-based application.
Tinogona zvakare kuwana iyo kuenderera kusimudzira kwekushandisa kwakagadzirwa sechikamu cheiyo X-Apps chirongwa inovavarira kubatanidza iyo software nharaunda muLinux Mint editions zvinovakirwa pamatafura akasiyana.
X-Mapurogiramu anoshandisa matekinoroji emazuva ano (GTK3 kutsigira HiDPI, gsettings, nezvimwewo), asi chengetedza echinyakare zvimiro zvemukati senge turu yekushandisa uye menyu. Pakati peaya maficha pane: Xed chinyorwa mupepeti, Pix foto maneja, Xreader gwaro rinoona, Xviewer mufananidzo muoni.
Mune maneja wemapikicha, unogona kusarudza yemhando yemhando kuti uratidze mafoto mune slideshow mode.
Iyo Xed chinyorwa mupepeti (davi rePluma / Gedit) akawedzera rutsigiro rwekuvhura ma link nekukanya kurudyi.
Mune iyo Xreader gwaro rinoona (bazi reAtril / Evince), mabhatani akawedzerwa kuti aone zvirevo papaneru.
Xviewer inowedzera iyo pfupi nzira yekhibhodi Ctrl + 0 kugadzirisa patsva chiyero.
Panzvimbo peye graphical mupepeti GIMP, kuendesa kwekutanga kwave kuchizadzikiswa nechishandiso chiri nyore "Kudhirowa".
Xplayer uye VLC vatambi venhau vakatsiviwa neCelluloid (yaimbove GNOME MPV), inozivikanwa kuti ndiyo yekumusoro-kuguma kuGTK +.
Iyo nyowani vhezheni yeBluetooth yekubatanidza mubatsiri, Blueberry, ndeyekuona zvishandiso nekukurumidza uye nekuzivisa zvikanganiso zvakanyanya.
Dhawunirodha uye tora Linux Mint 19.3
Kune avo vanofarira tora iyi vhezheni itsva yeLinux Mint, vanofanira kuziva kuti iyecompilations inowanikwa seDVD mifananidzo zvinoenderana neshanduro dzakasiyana dzainopa, MATE 1.22 (2 GB), Cinnamon 4.4 (1.9 GB) uye Xfce 4.14 (1.9 GB).
Iyo system mufananidzo inogona kunyorwa pane pendrive nerubatsiro rweEtcher inova iyo multiplatform chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Linux Mint 19.3 inosvika iine dzakasiyana siyana dzekuvandudza uye dzimwe nhau
Joseph Barrera akadaro
Ini ndanga ndichida kushanda ne linux asi ndoda kurudziro yekutenga kwakanyanya kwedzidzo. Ndiyo yakanakisa uye ini ndaona mese mharidzo nekuvandudzwa. Zvakanakisa. Asi pane zvinhu zvandiri kuda kugona zvirinani husiku hwakanaka kubva kuCosta Rica
Pindura kuna Joseph Barrera
Nyora iyo nyowani vhezheni yeQEMU 4.2, ziva nhau dzayo dzakakurumbira
Mhosva yaRambler yakanangana neNGINX haina basa uye zvakare ane mhosva inopokana naTwitch